မေးခွန်း ပြတင်းပေါက်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ 10
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #344 by alainthomas21
Is FSX ပြတင်းပေါက် 10 နှင့်သဟဇာတ?
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #345 by JanneAir15
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့် Windows ကို 10 အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါတကယ်သုံးပြီးတယ် FSX Windows ကို 10 အပေါ်ကကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #346 by Gh0stRider203
သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများရှိပါက, ဒီ site ကိုကူညီလိမ့်မယ်။ မိုင်း၏မိတျဆှေရေနွေးငွေ့ Edition ကို run နေနှင့်အချို့သောဒုက္ခရှိခြင်းခဲ့သည်။
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #347 by Colonelwing
Gh0st ,,, သင်တို့အဘို့မေးခွန်းတစ်ခုတယ် ,,,
ငါတစ်ဗားရှင်း FSX ယခု fiew နှစ်ပေါင်းကတည်းက Microsoft ကထဲကနေ CD ကိုသေတ္တာပေါ်မှာရွှေ Edition ကို။
ငါအဟောင်းတွေကို PC ပေါ်မှာတာရှည်စဉ်ကတည်းကကြောင်းဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ရချင်နေပါတယ်
အ FSX ငါ၏အသစ်ကိုမြင့်မားတဲ့အဆုံးသို့ယခုတွင်ငါသည်ရှိသာကို PC SIM ။ ငါ Steam ရဖို့စဉ်းစားခဲ့သည် FSX ဗားရှင်း ,,,
ငါမူကား befort သောငါ၏ထိုရေနွေးငွေ့ပြောင်းရွှေ့အောင်သေချာဖြစ်ချင်တယ် FSX ကျွန်မတိုရွှေ Edition ကို CD ကို box ကိုဗားရှင်း
ငါသည်ငါ၏အသစ်အမြင့်မားဆုံးကိုသစ်ကို PC Sim အပေါ်ရှိသည်ဝင်း 10 အပေါ် wont အလုပ်။
ငါ tought FSX ငါတို့သည်ချင်တယ်ဆိုရင်ရွှေ Editon CD ကို Box ကိုဗားရှင်းတော့ဘူးအလုပ်လုပ်မေ့သွားရော FSX အပေါ်ရွှေ Edition ကို
အသစ်တစ်ခုကိုဝင်း 10 PC ကို။
မေးခွန်း ,, ငါနေဆဲငါ့အ CD ကိုသေတ္တာကိုသုံးနိုင်သည် FSX အများအပြားအဘို့အကြှနျုပျ၏သစ်ကိုဝင်း 10 မြင့်မားတဲ့အဆုံးကို PC ပေါ်မှာရွှေ Edition ကိုဗားရှင်း
လာနှစ်ပေါင်း ,, သို့မဟုတ်ငါ၏ Steam ဗားရှင်းခလုတ်ကိုစေရန်ရှိသည် FSX ?
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #348 by Gh0stRider203
ရိုးသားစွာအချင်းလူသား, ငါသေချာမသိဘူး။ သင့်ရဲ့ရွှေထုတ်ဝေနေဆဲငါကိုဖတ်ပါတယ်အဘယျသို့ကနေအလုပ်လုပ်သင့် ဒီမှာ
ငါနေဆဲနေဆဲကျွန်မရဲ့ Desktop ပေါ်မှာ Windows ကို7running နှင့်ရွှေ Edition ကို အသုံးပြု. တာပါ။
Colonelwing wrote: Gh0st ,,, သင်တို့အဘို့မေးခွန်းတစ်ခုတယ် ,,,
လာနှစ်ပေါင်း ,, သို့မဟုတ်ငါ၏ STAEM ဗားရှင်းခလုတ်ကိုစေရန်ရှိသည် FSX ?
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago -2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #349 by Colonelwing
yeah ငါသညျငါ့ဗားရှင်းနဲ့အတူပျံမဆိုအွန်လိုင်းတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည် dont အမြဲတမ်းအော့ဖ်လိုင်းပျံသန်းကြောင့်နေဆဲ ,, ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ယင်း၏မ addons အဘို့ငါသည်ငါ့အတွက်သူတို့ကိုအသုံးချ dont အဖြစ် FSX ဖိုင်တွေ ,, ငါသာကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းလင်းရန်မှ addons လေယာဉ် load
ကြှနျတေျာ့ကို PC ပယ်သို့မဟုတ်ငါနောက်တဖန်သူတို့ကိုပျံများကဲ့သို့ခံစားရတိုင်အောင်ထိုဆက်လက် zipfiles သို့ FSX နောက်တဖန်ဖိုင်တွေ SIM ။
အကြှနျုပျ၏အဓိက objectif ရေး Simulator သာအသုံးပြုနိုင်သည်ကိုငါယခုရှိတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းမြင့်မားတဲ့အဆုံးကို PC သို့ငါ၏အ DVD ကို box ကိုဗားရှင်းအနေဖြင့် re-load ငါ၏အ PMDG B737NGX ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါနဲ့ဤမျှလောက်များစွာသောပြောင်းလဲမှုပြုသောအမှုရှိသည်နှင့်ငါအပေါ်ပျံသန်းလမ်းကိုထိခိုက်စေ wont သူတို့ dont ,, ကအားလုံးကိုငါ Steam မှာအပေါ်ကိုဖတ်ရှုအရာကိုသကဲ့သို့ငါ့ကိုချောအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ခန့်မှန်း FSX အနာဂတ်မှာသို့အလွန်သက်တမ်းကြာသည်။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့က၌ရှိကြ၏အဖြစ် FSX sim ဘာသာရပ် ,,, ငါ့အသစ်ကို PC မှာ Win10 များအတွက် ,,, ငါကြီးမြတ် HOTAS များအတွက်ချောင်းကိုရှာဖွေနေခြင်းနှင့်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာပြီ
အလွန်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါ၏အဟောင်းများကို Logitech တစ်လုပ်ကိုကျော်ဘို့အဆင်သင့်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ,, ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုအကောင်းပျံ၏ဤမျှလောက်များစွာသောနှစ်အပေးခဲ့ပါဘူးအဖြစ်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုအခြို့သော HOTAS စာရင်းပြုစုနိုင်သလားသင်သည်ထွက်ကိစ္စများသို့မဟုတ်ပြဿနာများနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းကောင်းတစ်ခုကာလအတွက်သုံးစွဲဖို့အဘို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ် ,, အဆိုပါ QControl meen totaly ကြီးမြတ်သို့မဟုတ်ထိပ်တန်းအဆုံးဖြစ်ဖို့ရှိသည်။
ငါဈေးကွက်တွင်တစ်ဦး fiew ကိုသိ ,,, သော်လည်းသင်မှာအကြှနျုပျကိုညွှန်ပြမယ်လို့ HOTAS အကြောင်းကိုဇာတ်လမ်းသင့်ရဲ့ဘေးထွက်စကားကိုနားထောငျဖို့လိုသည်။
အားလုံးကအခြားလူမျိုးငါ PRO လေယာဉ်မှူးအဖြစ်သုံးစွဲဖို့ရှာသင့် HOTAS ပါလိမ့်မယ်အဘယ်သို့သောအကြောင်း reply နိုင်ပါတယ်။
မဆိုစျေးနှုန်း TAG ,, ငါ့ထံသို့ doesnt ကိစ္စ ...
ကြောင်း HOTAS အမှု၌အမြင်နှင့်အတွေ့အကြုံများသင့်ရဲ့အမှတ်မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #350 by Gh0stRider203
သငျသညျသွားလျှင်ငါတကယ်အရမ်းရယ်ရတယ်လေယာဉ်ခြေရာခံခြင်း software ကိုအသုံးပြုနေသည်ပါဘူးပျံသာ "အွန်လိုင်း" ဒီမှာ သငျသညျအကြှနျုပျ၏ပျံသန်းမြင်လျက်လည်းပျံနေသောအခြားသူများပါလိမ့်မယ်။ KDFW - LFRG - KDFW ကျွန်မရဲ့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်အရမ်းရယ်ရတယ်က "လစာ" အရမ်းရယ်ရတယ်တော်တော်လျောက်ပတ်ဖြစ်ပါသည်
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #351 by Colonelwing
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်လည်းပျံနေသောအခြားသူများ။ KDFW - LFRG - KDFW ကျွန်မရဲ့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်အရမ်းရယ်ရတယ်က "လစာ" အရမ်းရယ်ရတယ်တော်တော်လျောက်ပတ်ဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါလစာအရမ်းရယ်ရတယ် ,,, Eh လျောက်ပတ်ဖြစ်ပါသည်
ဖော်ပြထားခြင်းသည်အတိုင်း, ငါအွန်လိုင်း ,, ငါ့ကိုရန်၎င်း၏အားလုံးအသစ်ကပျံခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်ပျံသန်းကမ္ဘာကြီးထဲကအကြှနျုပျကိုအသစ်မဟုတ် ,, အရမ်းရယ်ရတယ် ,, ကြောင်းလမ်းကြောင်းကောင်းစွာပေးဆောင် glade
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #352 by Gh0stRider203
Colonelwing wrote: အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်လည်းပျံနေသောအခြားသူများ။ KDFW - LFRG - KDFW ကျွန်မရဲ့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်အရမ်းရယ်ရတယ်က "လစာ" အရမ်းရယ်ရတယ်တော်တော်လျောက်ပတ်ဖြစ်ပါသည်
အကြှနျုပျ၏ VA သို့ရဲ့ပြန်ကြားရေး သငျသညျအကောင့်လက်ကျန်ငွေကိုကလစ်နှိပ်ပါ, နှင့်သင်္ချာကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သင်ငါ VA သို့အချို့သောလျောက်ပတ်သောငွေသားအောင်တာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအဖြစ်ကောင်းစွာငှက်ပေးဆောင်ကူညီရန်သုံးလေ့ကတည်းကအစဉ်မပြတ်ငါ, ငါလေယာဉ်မှူးအဖြစ်လုပ်အဘယ်အရာကိုများပါဝင်သည် ယခုလျှင်သာငါအရမ်းရယ်ရတယ် RL အတွက်အများကြီးလုပ်ခဲ့သည်
2 နှစ်ပေါင်း 11 months ago #356 by Colonelwing
မျှဝေမှု link ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
0.266 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်